DEG DEG: Kulankii Kismaayo ee Siyaasiinta, Qodobada soo baxaya & Wararkii u dambeeyey. -News and information about Somalia
Home Warkii DEG DEG: Kulankii Kismaayo ee Siyaasiinta, Qodobada soo baxaya & Wararkii u...
DEG DEG: Kulankii Kismaayo ee Siyaasiinta, Qodobada soo baxaya & Wararkii u dambeeyey.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ay maanta soo dhamaan doonaan kulamada ay leeyihiin Madaxdii hore ee Soomaaliya, Madaxda dawlad gobaleedyada iyo siyaasiin kala duwan oo iskugu tagay magaalada Kismaayo, waxayna wadatashi ka leeyihiin arrimaha siyaasadda ee dalka.
Kulamadii ugu adkaa ayaa dhinacyada dhexmaray shalay, waxayna diiradda ku saareen Ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo doorashada soo wajahan ee dalka oo ay walaac badan ka qabaan nooca ay u qabsoomi doonto.
Warar hoose ayaa sheegaya in kulamadii shalay qodobada qaarkood laysku fahmi waayay oo ay dood ka dhalatay, intaas ka dibna laysku raacay in laga wada hadlo kuwa laysku raacsan yahay oo aan awood badan lagalin qodobada ay aragtiyaha kala duwan qabaan dhinacyadu.
Ururo siyaasadeedka Muqdisho, waxay qabaan fikrad oranaysa in dhammaan dhinacyada Siyaasadda ee dalka ay markale isku yimaadaan oo ay soo wada saaraan go`aan mideysan ayna shirarkaas martigaliyaan dawlad gobaleedyada Jubbaland iyo Puntland.
Laakiin, taasi Puntland & Jubbaland waxay dhinac kale u arkayaan xaaladda oo ay sheegayan in loo baahan yahay in lays kugu yimaado caasumada dalka, oo ay halkaas noqoto meesha looga tashanayo arrimaha siyaasadda.
Sidaas oo kale arrimaha taagan waxaa kamid ah qaabka doorashada laftirkeeda loo wajahayo oo ay dhinacyada ka wada hadlayaa waxba go`aan ah aysan ku laheyn,isla markaasna ay dawladda Soomaaliya bisha December ee nagu soo aadan ay toos u horgeyn doonto Beesha Caalamka, taas oo ah qorshe kale oo ay walaac ka qabaan.
Qodobadan laga wada hadlay iyo Warsaxaafadeed ugu dambeynta waxaa lafilayaa in uu maanta soo baxo, iyadoo ay warar sheegayaan in ay suuragal tahay in ay maalin kale sii socdaan wada xaajoodyada, balse sida muuqata Jubbaland waxaa saaran culeys weyn oo ah martigalinta kulamadan siyaasiga ah.
Previous articleSiciid Deni masoo mari doonaa Muqdisho, marka uu kasoo laabanayo Kismaayo?
Next articleDHAGEYSO: Taabid Cabdi Oo Ka Hadlay 2 Sano Kadib Musiibadii Ka Dhacday Isgoyka Zoobe